Xildhibaanada oo lagu eedeyay in ay qorsheynayaan sidii loo yareyn lahaa lacagaha loo qoondeyo countiyada – Star FM Kenya
Xildhibaanada oo lagu eedeyay in ay qorsheynayaan sidii loo yareyn lahaa lacagaha loo qoondeyo countiyada
February 13, 2017 starfmke 0 Comment
Ururka qaran ee macaliminta ee KNUT iyo sido kale gavanaha maamul goboleedka Bomet Isaac Ruto ayaa mudanayaasha qalka baarlamaanka ku dhaliilay in ay wadaan qorsho la xiriira sidii loo yareyn lahaa miisaaniyada loo qoondeyo countiyada dalka.
Xogahayaha guud ee ururka macalimiinta ee KNUT Wilson Sossion iyo gavana Ruto ayaa xildhibaanada ku eedeyay in ay carqaladeynayaan dowlada wadaajinta maadama sida ay hadalka u dhigeen ay xadidayaan lacagaha loogu talagalay horumarka.
Waxay intaas ku dareen in qorshahan uu ka dhiganyahay mid anan lagu tixgelinin danta shacabka.
Labada hogaamiyayaal ayaa wacad ku maray in aysan marnaba ogolaan doonin isku day kasta oo qorshahaasi la xiriira.
Dhanka kale xildhibaankii hore ee degaanka Limuru Peter Mwathi ayaa Wilson Sossion uga digay in uu siyaasadeeyo arrimaha macalimiinta isaga oo ku eegayo dano u gaar ah.
Waxaa uu talaaba qaldan ku tilmaamay in xogahayaha KNUT uu ka dhawaajiyay in uu macalmiinta ku boorinayo in aysan tageerin xisbiga Jubilee isaga oo ku andacoonayo in maamulka talada dalka haya uusan xalinin waxyaabaha ay barayaasha tabanayaan.
← Madaxa cadaalada dalka oo ku baaqay in isbedel lagu sameyo shuruucda doorashooyinka
Dibadbaxyo looga soo horjeedo siyaasada Trump oo ka dhacay dalka Mexico →
Madaxda degaanka Ijara oo dowlada ku dhaliilay in anan lagala tashanin keynta Boni
July 30, 2016 starfmke 0
Labo qof oo burcadnimo lagu tuhmayo oo lagu dilay countiga Kiambu alaabtii ay dhaceena laga soo qaaday
October 16, 2016 starfmke 0
Dowlada oo sheegtay in ay la shaqeyn doonto guddomiyaha cusub ee gudiga midowga Afrika